Publications | Just Another WordPress Blog
VANSANGVA VOLUME I
Author: Salai Kipp Kho Lian
Edited by U Khin Maung Saw
ဤစာအုပ် သည် ခေတ်သစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း တလျှောက် လူမျိုး ပေါင်းစုံ ပြည်သူတို့ ၏ လွတ်လပ်ရေး၊ တန်းတူရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တို့ အတွက် အသက်ပေးစပ် စတေးခဲ့ကြသည့် အညတရ သူရဲကောင်းများ အားရည်စူးပါသည်။
ဤစာအုပ်ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စောင်ရေ ၅ဝဝဝ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း စာအုပ် အနေနှင့် ဖတ်ရှု ရန်လက်လှမ်းမ မီသည့် စာဖတ်ပရိသတ်များ အတွက် အွန်လိုင်းမှ download လုပ်ကာဖတ်ရှု နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး PDF ကော်ပီ ကို ကျွန်တော်များ Vansangva စာကြည့်တိုက်တွင်တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ဖေါင့် အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုထားသဖြင့် ဖတ်ရရှုရာတွင် ပိုမိုလွယ်စေကူရန်အတွက် ပထမဦးစွာ မိမိတို့၏ ကွန်ပြူတာတွင် download လုပ်ပြီးမှ ဖတ်ရှု ပါက ပိုမို အဆင်ပြေပါမည်။
On behalf of the CHIN FORUM I would like to extend my heartfelt thanks to all those who have contributed to the successful completion and publication of Basic Principles of Democracy, Vansangva Volume I. Special acknowledgment goes to National Endowment for Democracy (NED) for its generous financial supports, without which the process of producing and publication of this book would not have been possible. The CHIN FORUM also acknowledges the distinguished contributions of U Khin Maung Saw, who contributed his valuable time, effort and knowledge as editor of the book – Basic Principles of Democracy, Vansangva Volume I, with true spirit of volunteerism.
The valuable contributions and supports of my closest colleagues from the CHIN FORUM MANAGING BOARD and of the many other young people , friends, individuals of various ethnicities of the Union of Burma, who have volunteered, given advices and comments throughout the process of producing this work are herewith, also acknowledged. Last but not the least my special thanks also goes to my beloved wife Dalcing, who has supported me with her love, understanding and encouragement during the last three years of my work producing this book.
Salai Kipp Kho Lian
CHIN FORUM MANAGAING BOARD
Published by the CHIN FORUM with the financial support of the National Endowment for Democracy
Written by mike16os
Vansangva Library – Vansangva စာကြည့်တိုက်
Salai Tin Maung Oo
Special Release: Welcoming Daw Suu
Appendix of Part I and II
Vansangva Site News